Vakasarudzwa seMutungamiri weAmerica, VaJoe Biden, Vanodoma Mamwe Madzimai Asiri eChichena muHurumende Yavo
Vakasarudzwa kutungamira America, VaJoe Biden
Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica, VaJoe Biden nezuro vakazivisa nezvekudoma kwavo nezvevamwe vanhu vane chitsama vachatora zvigaro zvepamusoro muhurumende, kusanganisira madzimai matatu asiri echichena.
Mumashoko kuvatori venhau, chikwata chaVaBiden chiri kutungamira hurongwa hwekuchinjanwa kwemasimba chakati chiri kudoma nhengo yeparamende Amai Marcia Fudge kutungamira bazi rezvepekugara nebudiriro yemaguta.
Vaimbove mumiriri weAmerica kuUnited Nations, Ambassador Susan Rice vakadomwa semukuru anoona nezvezvirongwa zvemukati menyika, kana kuti Domestic Policy Council, kwozoti Amai Katherine Tai vachidomwa semumiri weAmerica mune zvekutengeserana.
Amai Fudge naAmbassador Rice madzimai echitema, kuchitiwo Amai Tai vari veku Taiwan.
VaBiden vakadomawo zvakare vaimbove gavhuna ve Iowa, VaTom Vilsack kuti vatungamire bazi rezvekurima, chigaro chavakambobata kwemakore masere muhurumende yevaimbove mutungamiri wenyika, Vabarack Obama, umo VaBiden vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Vakadomawo VaDenis McDonough, vaimbove mushandi mukuru wekuWhite House munguva yaVaObama, kuti vave gurukota rezvekugara kwakanaka kwemagamba.
VaBiden vakazivisawo mumashoko avo nemusi weChina, kuti chikwata ichi chakazvipira uye chine hunyanzvi sevashandi vehurumende, vachiti chichaunza ruzivo rwepamusorosoro, kunzwira vamwe tsitsi, kuvimbika, kugadzirisa matambudziko nekuwedzera mikana kuvanhu vemuAmerica kana vakasangana nezvimhingamipinyi zvakakura.
Vakavimbisa kuti vachashanda zvakasimba kubva zuva rekutanga.
Kana vakatambirwa, Amai Fudge vachange vave mumwezve mudzimai wechitema anenge aine chigaro chepamusoro muhurumende iri kuuya iyi, zvichitevera vakasarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika, Amai Kamala Harris nevakadomwa kuve mumiriri kuUnited Nations Amai Linda Thomas-Greenfield.
VaBiden vanga vasiri kuda kudoma nhengo dzebato ravo dziri mudare reparamende kuti dzipinde mudare remakurukota ehurumende yavo nekuda kwemamiriro akaita zvinhu mudare reparamende repasi umo bato ravo reDemocratic Party riine huwandu nezvigaro zvishomashoma, uyewo kusaziva mamiriro achazenge akaita dare reSeneti.